कांग्रेसमा गुटगत विवाद चुलिंदै, पौडेल समूहको छुट्टै बैठक - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । निर्वाचन पराजयसँगै सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र गुटगत विवाद चुलिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ नराम्ररी पराजय भएपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै आएको पौडेल समूहले सोमबार छुट्टै बैठक गरी नेतृत्व, संगठन र सिद्धान्त परिमार्जनका विषयमा छलफल गरेको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहसहित १४ नेता सहभागी बैठकले नेतृत्वलाई पार्टी विधानअनुसार चल्न दबाब दिने सहमति गरेको नेताहरूले बताएका छन् । पौडेल पक्षकै सात युवा नेताले पनि सोमबारै कांग्रेसप्रति शुभेच्छा राख्ने बुद्धिजीवीसँग छलफल गरेका छन् । पुरानो बानेश्वरस्थित सिद्धार्थ कटेजमा भएको छलफलमा नेताहरूले युवा समूहले अघि सारिरहेको विचारबारे छलफल गरेका थिए । पौडेलपक्षीय नेताहरू नवीन्द्रराज जोशी, दीपक गिरी, गुरुराज घिमिरे, गोविन्द भट्टराई, रामकृष्ण यादव, किरण यादव, सरिता प्रसाईंले बुद्धिजीवीहरू डा. जीवराज पोखरेल, डा. यज्ञ अधिकारी, अच्युत वाग्ले, श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम लगायतसँग छलफल गरेका हुन् ।
१४ नेता सहभागी बैठकले नेतृत्वलाई पार्टी विधानअनुसार चल्न दबाब दिने सहमति गरेको छ । पार्टीको विधानअनुसार नेतृत्व नचलेकाले दबाब दिन अभियान नै सुरु गर्न लागेको नेता जोशीले जानकारी दिए । ‘हामी सबै पक्षसँग लगातार छलफल गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सोमबार बसेको बैठकमा चुनाव हारको पनि समीक्षा भएको छ । बैठकले कार्यसम्पादन र संसदीय समितिलगायत निर्णयमा समेत विधान मिचिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।’ आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।